Jamaica Blitz oo ku saabsan Suuqyada Caalamiga ah: Cusboonaysiinta Rasmiga ah ee Wasiirka Dalxiiska
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Jamaica News Breaking » Jamaica Blitz oo ku saabsan Suuqyada Caalamiga ah: Cusboonaysiinta Rasmiga ah ee Wasiirka Dalxiiska
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Caribbean • saaciday inay • kariska • dhaqanka • Wararka Dowladda • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • Jamaica News Breaking • Shirarka • News • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka
17 min akhris
Wasiirka Dalxiiska Jamaica, Hon. Edmund Bartlett, ayaa baarlamaanka u gudbiyay warbixin ku saabsan waaxda dalxiiska. Hoos ka akhriso hadalkiisa.
Warshadaha dalxiiska ee Jamaica si isdaba joog ah ayey dib ugu soo laabanayaan qaab weyn iyo baahida loo qabo badeecadayada dib loo habeeyay ayaa mareysa heerkii ugu sareysay abid.
Ma jirto meel tani ka caddahay marka loo eego suuqyadeena shanta toddobaad ee guusha aadka u sarreeya ee blitz naga soo qaaday Maraykanka iyo Kanada ilaa Bariga Dhexe iyo Boqortooyada Ingiriiska.
Jawaabtu runtii waxay ahayd mid aan caadi ahayn.
Waxaa durbaba cad in tirooyinka in habkayaga cusub ee wax-bixintayada dalxiiska, ee ka dhashay tixgelinnada faafa ee COVID-19, uu faa'iido leeyahay. Tirooyinka imaatinkayaga ayaa kor u kacaya, hawo qaadida xilliga jiilaalka ayaa u muuqata mid wanaagsan, socdaalkuna waxa uu ku soo noqon doonaa dhammaan dekedahayada ka hor dhamaadka sanadka.
Soo-galootiga joogtada ah ilaa hadda wuxuu marayaa 1.2 milyan, tan iyo markii dhoofintu dib u bilaabatay Ogosto, waxaan soo dhawaynay in ka badan 36,000 oo rakaab ah, halka dakhligayagu uu hadda marayo US$1.5 bilyan.
Jamaica si fiican ayuu u socdaa si uu u soo kabsado. 2021 imaatinka joogsiga waxaa lagu qiyaasaa in ay kor u kacday 41% sanadba sanadka ka dambeeya, sanadka ilaa maanta waxaan soo celinay ku dhawaad ​​kala bar ganacsigii joogsaday ee 2019.
Akhbaarta wanaagsan ayaa ah in Disembar inta badan ay noo tahay bil xooggan, waxayna bilaabataa xilliga sare marka heerarku sarreeyo, sidaa darteed waxay u badan tahay inaan la kulmi doono saadaashayada 1.6 milyan oo booqasho iyo in ka badan US$2 bilyan oo dakhli ah.
Dhamaadka sanadka 2022, tirada dadka soo booqda ee Jamaica ayaa la filayaa in ay gaaraan 3.2 milyan, iyadoo rakaabka dalxiisku ay gaarayaan 1.1 milyan halka kuwa joogsadana ay gaarayaan ku dhawaad ​​2.1 milyan, halka dakhliga lagu saadalinayo US$3.3 bilyan.
Dhamaadka 2023, tirada dadka soo booqda ee Jamaica ayaa la filayaa inay wadartoodu noqoto 4.1 milyan, iyadoo rakaabka dalxiisku ay noqonayaan 1.6 milyan halka joogsiga soo degaya ay noqonayaan 2.5 milyan oo ay dakhli ka helaan US$4.2 bilyan.
Dhamaadka 2024-ka, waxaa la saadaalinayaa in aan dhaafno tirooyinkayada ka hor faafitaanka iyadoo wadarta dadka soo booqday ay gaarayaan 4.5 milyan waxaana lagu qiyaasay dakhliga guud ee sarifka lacagaha qalaad ee US$4.7 bilyan.
Warar kale oo togan oo dhinaca warshadaha ah kuwaas oo tilmaamaya soo kabashadan adag ee dalxiiska:
90% mashaariicda maalgashiga kahor masiibada ayaa weli jira.
In ka badan toban mashruuc oo huteelo lagu horumarinayo ayaa socda.
5,000 qolal dheeraad ah.
Horumarrada ka socda dhammaan qaybaha kala duwan ee jasiiradda.
Soo celinta hawlaha safarka ee dhammaan dekedaha jasiiradda horraanta Disembar
Iyada oo si kooban u taabanaysa maraakiibta, ka dib hakad ku dhow 20-bilood, Falmouth waxay soo dhawaysay markabkeedii ugu horreeyay ee dalxiis Axaddii - Shirkadda Carnival Emerald Princess, oo ay la socdaan ilaa 2,780 rakaab ah iyo xubno shaqaale ah.
Celebrity Equinox, Aida Diva iyo Crystal Serenity ayaa la filayaa inay ku soo laabtaan Falmouth dhamaadka bishaan. Markabka calanka ee Disney Cruise Lines ee Disney Fantasy ayaa la qorsheeyay inuu booqdo Disembar.
Imaatinka Boqorada Emerald waxay siisay fursad jilicsanaanta Tuulada Farshaxanka ee Hampden Wharf oo leh 10 farshaxan. Waxaa si aad ah u soo dhaweeyay dadka dalxiisayaasha ah. Sanduuqa Kobcinta Dalxiiska ee $700-milyan (TEF) – tuulada la maalgeliyay ayaa dulucda looga leeyahay in loo sheego sheekada Falmouth waxayna siisaa Jamaican iyo booqdayaasha fursad ay ku wadaagaan cuntada, cabitaanka, farshaxanka, farshaxanka, iyo dhaqanka maxalliga ah.
Waxay ka kooban tahay qayb ka mid ah mashruuca ballaadhan ee Hampden Wharf Development waxayna noqon doontaa tii ugu horreysay ee tuulooyin farshaxan oo taxane ah oo noqon doona meelaha dalxiiska ee jasiiradda.
Natiijooyinka guusha leh ee suuqyadeenna caalamiga ah ee blitz ayaa hubaal ah inay naga caawin doonaan inaan gaarno yoolkan haddii aan la dhaafin.
Waxaan rumaysanahay arrintan dib u soo kabashada togan iyo korodhka baahida Brand Jamaica inta badan waxaa sabab u ah dadaalkeena guusha leh ee ku aadan soo celinta kalsoonida socotada ee Destination Jamaica.
Nidaamyadayada caafimaadka iyo badbaadada, Waddooyinka Resilient, Jamaica Cares, iyo heerka tallaalka sare (qaar 60%) ka mid ah shaqaalaheenna dalxiiska ayaa u xaqiijinaya booqdayaashayada waayo-aragnimo fasax ah oo badbaado leh, ammaan ah oo aan xidhiidh lahayn.
Waxaan jeclaan lahaa in aan la wadaago qaar ka mid ah natiijooyinkii ugu muhiimsanaa safarradii ugu dambeeyay, oo ay weheliyaan mas'uuliyiin kale oo dalxiiska ah, oo aan ku tagayno suuqyada ugu muhiimsan iyo sidoo kale qulqulkayaga suuqa aan caadiga ahayn ee Bariga Dhexe, halkaas oo aan raadinay inaan kor u qaadno soogalootiga iyo kobcinta maalgashi dheeri ah oo lagu sameeyo waaxda dalxiiska.
Suuqyada Maraykanka iyo Kanada ee Blitz
Waxaan ku bilownay shirar isdaba joog ah oo aan la yeelanay hogaamiyayaasha warshadaha safarka, warbaahinta iyo daneeyayaasha kale ee labada suuq ee ugu weyn, Mareykanka iyo Kanada. Waxaan ku faraxsanahay inaan la wadaago in ka-qaybgalkeena aan la yeelannay la-hawlgalayaasha dalxiiska ee muhiimka ah ee labada suuqba uu ahaa mid miro dhal ah.
Waxaa jiray walaacyo la xiriira COVID-19 waxaana rabnay inaan xaqiijinno danaha dalxiiska in Jamaica ay weli tahay meel nabdoon.
Hab-maamuusyadayada ayaa jira si aan u hubinno in booqdayaashu ay iman karaan jasiiradda, aadi karaan meelahayaga soo jiidashada leh oo ay leeyihiin waayo-aragnimo Jamaican ah oo dhab ah oo badbaado leh oo aan kala go 'lahayn. Si kastaba ha ahaatee walaacyadan, si kastaba ha ahaatee, kalsoonida Jamaica ayaa weli ah mid xooggan.
Maamulayaasha shirkadda diyaaradaha ee ugu weyn adduunka, American Airlines, ayaa noo xaqiijiyey in jasiiradda ay arki doonto illaa 17 duullimaadyo aan joogsi lahayn maalin kasta, iyadoo baahida loo qabo meesha ay ku socoto ay kor u kacdo.
Waxa kale oo ay tilmaameen in Jamaica ay kaalinta koowaad kaga jirto Kariibiyaanka ee macaamiisha ku sugan barxadooda Fasaxa ee Duulimaadka Duulimaadka ee American Airlines oo ay xaqiijiyeen inay ka faa'iidaysan doonaan diyaaradahooda cusub, waaweyn, ballaaran ee Boeing 787, dhowr waddo oo muhiim ah oo Jamaica ah laga bilaabo November.
Shirkadda Southwest Airlines, oo ah mid ka mid ah shirkadaha diyaaradaha ee ugu waaweyn Maraykanka, isla markaana ah duulimaadka diyaaradeed ee ugu qaalisan adduunka, ayaa u xaqiijisay waftigayada in hawlahooda duulimaadka ee Montego Bay bilaha soo socda ay aad ugu dhow yihiin 2019 heerarkii masiibada ka hor, taasoo muujinaysa baahida korodhay. U socdaalayaasha Mareykanka ee u socda Jamaica.
Koonfur-galbeed waxay ka shaqeysaa duullimaadyo aan joogsi lahayn oo u dhexeeya garoommada caalamiga ah ee Maraykanka ee Houston (Hobby), Fort Lauderdale, Baltimore, Washington, Orlando, Chicago (Midway), St. Louis iyo Montego Bay.
Expedia Inc., oo ah hay'adda ugu weyn ee safarka internetka ee adduunka iyo soo saaraha ugu weyn ee ganacsiga dalxiiska ee Jamaica, ayaa sheegay in xogtoodu ay si cad u muujinayso qiimaha habeenkii ee qolka iyo kobaca rakaabka iyada oo labada mitirba ay dhaafeen waqti isku mid ah 2019. Waxay sidoo kale xuseen in Maraykanku uu weli joogo. guud ahaan suuqa asalka raadinta sare ee Jamaica.
Suuqayada isha labaad ee ugu weyn, Kanada, waxay keeni doontaa 50 duullimaadyo aan joogsi lahayn toddobaadkiiba jasiiradda. Duulimaadyada, oo bilaabmay Noofambar 1, waxaa maamuli doona Air Canada, WestJet, Sunwing, Swoop iyo Transat oo leh adeegyo toos ah oo ka socda magaalooyinka Kanada ee Toronto, Montreal, Calgary, Winnipeg, Hamilton, Halifax, Edmonton, St. John's, Ottawa, iyo Moncton.
Ballanqaadka hore ayaa dul wareegaya 65% ee heerarka 2019 iyo hawo qaadistii Xilliga Jiilaalka ayaa ku dhow 82% ee heerarka 2019 iyada oo ku dhawaad ​​​​260,000 kuraas ah ay xiran yihiin. Tani waa war wanaagsan maadaama Kanada si aan xad lahayn ay u saameysay xayiraadaha safarka ee la xiriira COVID-19, kaas oo dhowr bilood ayaa la xiray safarradii caalamiga ahaa.
Halka Royal Caribbean International, oo ah khadka labaad ee ugu weyn markab lagu safro adduunka, uu dib u hawlgeliyay Jamaica bishii November ee sanadkan. Sidoo kale, maamulayaasha dalxiisku waxay ku celceliyeen rabitaan xoog leh oo ah inay shaqaalaysiiyaan kumanaan Jamaican ah oo kala duwan oo shaqooyin kala duwan ah waxayna sugayaan wax ka beddelka sharciyeynta dawladda si ay u noqoto mid dhab ah.
Suuqa Bariga Dhexe Blitz
Maalgashiga ayaa door muhiim ah ka ciyaari doona soo kabashada dalxiiska iyadoo la siinayo dhaqaalaha lagama maarmaanka u ah dhisidda iyo tayeynta mashaariicda muhiimka u ah horumarinta iyo kobaca awoodda dalxiiska.
Booqashadayada Bariga Dhexe waxa ay noo ogolaatay in aan sahamino fursadaha FDI ee dhinaca dalxiiska iyo sidoo kale in aan sii amba qaadno wadahadallo aan bishii June la furay Wasiirka Dalxiiska ee Sacuudiga, Mudane Ahmed Al Khateeb, ujeeddaduna tahay fududaynta iskaashiga iyo maalgashiga dalxiiska iyo meelaha kale ee muhiimka ah.
Joogitaankayagii ugu horreeyay waxa uu ahaa Isutagga Imaaraadka Carabta (UAE) ee Dubai World Expo 2020. Jamaica waxa ay ku jirtay bandhiga daar qurux badan oo muujinaya meelaha la geeyo alaabtii ugu dambaysay iyo hal-abuurnimada iyada oo hal-ku-dheggiisu yahay: “Jamaica ayaa ka dhigaysa in ay dhaqaaqdo.” Pavilion-ku waxa uu leeyahay todoba aag, kaas oo u ogolaanaya dadka soo booqda inay la kulmaan aragga, dhawaaqa iyo dhadhanka Jamaica, oo ay arkaan sida waddankeenu u guuro aduunka oo u adeega sida isku xirka saadka.
Aad baan ugu hanweynahay inaan la wadaago in daarkeenna soo jiidashada leh loo magacaabay mid ka mid ah 'ugu wanaagsan' Bandhigga Adduunka 2020 ee ay bixiso ITP Media Group qaybteeda, Time Out Dubai.
Safarka Dubia waxa uu na siiyay fursad aanu ku daba galno wadahadalo lala yeeshay maamulayaasha TUI, oo ka mid ah hawl-wadeenada dalxiiska ee ugu wayn iyo la-hawlgalayaasha qaybta qaybinta ee warshadaha dalxiiska.
TUI waxay xaqiijisay inay dib u bilaabeen duullimaadyadooda iyo safarkooda Jamaica, iyadoo hawlaha safarka la qorsheeyay inay bilaabmaan Janaayo 2022. Shirkaddu waxay si gaar ah u qeexday qorshayaasha guri-dejinta ee Montego Bay iyo ka mid noqoshada wicitaannada Port Royal ee jadwalka safarka. Waxaan filaynaa inaan ku helno shan wicitaan laga bilaabo Janaayo ilaa Abriil 2022 gudaha Port Royal. Intii lagu guda jiray wadahadalka TUI, maamulayaasha shirkadu waxay kula taliyeen in xogtoodu ay muujinayso in baahida socdaalku aad u sarreeyo, waxayna ku guulaysteen inay sii haystaan ​​boosaskii la joojiyay. Waxay sidoo kale wadaageen in awoodda hawadu ee xilliga jiilaalka ay noqon doonto 79,000, taas oo 9% kaliya ka yar tirooyinka jiilaalka ka hor COVID.
Intii aanu Dubai joognay waxa aanu soo gebagebaynay shirar muhiim ah oo dhinaca maalgashiga dalxiiska ah oo aanu la yeelanay shirkadda DP World oo ka mid ah shirkadaha saadka iyo saadka badda ee ugu weyn caalamka, fadhigeeduna yahay dalka Imaaraadka Carabta. Saddex maalmood oo xiriir ah oo shirar ah, waxaan si dhab ah uga wada hadalnay maalgashiga Dekedda Royal Cruise Port iyo suurtagalnimada in dib loo soo dejiyo. Waxaan sidoo kale ka wada hadalnay horumarinta xarunta saadka, gaadiidka badan ee Vernamfield iyo aerotropolis iyo sidoo kale maalgelinta kaabayaasha kale.
DP World waxay ku takhasustay saadka xamuulka, adeegyada badda, hawlaha dekedaha iyo goobaha ganacsiga xorta ah. Waxa ay gacanta ku haysaa ilaa 70 milyan oo konteenar oo ay keenaan ku dhawaad ​​70,000 oo markab sannadkii, taas oo u dhiganta 10% taraafikada konteenarada caalamiga ah oo lagu xisaabiyo 82 marinnada badda iyo gudaha ee jooga in ka badan 40 waddan.
Waxaan bilownay wadahadalo aan la yeelanay wakiilada sare ee Emirates Airlines, si aan u soo bandhigno adeeg gaar ah oo u dhexeeya Dubai iyo Jamaica, dabaaldega Maalinta Jamaica ee Expo 2020, Dubai Febraayo 2022. Emirates waa diyaarada ugu weyn ee Imaaraadka, iyo Bariga Dhexe guud ahaan, ka hawlgala. in ka badan 3,600 duulimaad todobaadkii.
Intaa waxa dheer, waxaanu filaynaa doodo dheeraad ah oo ku saabsan istaraatiijiyooyinka meelo badan oo lagu dejiyay waqooyiga Kariibiyaanka si ay awood ugu yeeshaan ka qaybqaadashada wanaagsan ee Emirate-ka iyo la-hawlgalayaasha kale ee Bariga Dhexe.
Waxaan sidoo kale la kulannay Maamulka Dalxiiska ee Imaaraadka Carabta si aan uga wada hadalno iskaashiga ku saabsan maalgashiga dalxiiska ee gobolka, hindiseyaasha dalxiiska ee Bariga Dhexe, marinka laga galo Waqooyiga Afrika iyo Aasiya iyo fududeynta duulista.
Intaa waxaa dheer, kulammo ayaa lala yeeshay madaxda EMAAR, oo lagu doodi karo martigelinta ugu weyn uguna sharafta badan iyo horumarinta guryaha/Bulshada ee Bariga Dhexe; DNATA, oo ah hawl wadeenka dalxiiska ee ugu wayn UAE iyo TRACT, oo ah hawlwadeen dalxiis oo awood badan gudaha Hindiya.
Safarkayagii aanu ku tagnay Imaaraadka waxa uu ku soo dhamaaday si wanaagsan. Qabanqaabada sanadkan ee Abaalmarinta Safarada Adduunka ee sharafta leh ayaa lagu qabtay Dubai, Jamaica waxay sii waday awooddeeda "Halka Caribbean ee Hoggaamineed" iyo 'Dalka Caribbean ee Hoggaanka Cruise Destination,' halka Guddiga Dalxiiska Jamaica loo magacaabay 'Guddiga Dalxiiska Hoggaaminta ee Caribbean.'
Waxa kale oo aanu ku guulaysanay laba qaybood oo cusub: 'Dalxiiska Dalxiiska Hormoodka ah ee Kariibiyaanka' iyo 'Dhismaha Dabeecadda Hogaamineed ee Kariibiyaanka'. Dhowr ciyaartoy oo ka tirsan warshadaha dalxiiska maxalliga ah ayaa sidoo kale u soo baxay guulo waaweyn.
Imaaraatka Carabta, waxa aanu ku sii jeednay magaalada Riyaad ee dalka Sucuudiga, halkaas oo aanu wadahadal kula yeelanay madaxda shirkadda diyaaradaha ee Sucuudiga. Waxaan ku faraxsanahay in aan la wadaago in qorshaha uu ku jiro tareenka si kor loogu qaado isku xirka hawada ee ka dhexeeya Bariga Dhexe iyo Kariibiyaanka.
Istaraatiijiyad ballaadhan waa in ay Jamaica noqoto xudunta isku xidhka Bariga Dhexe ilaa Kariibiyaanka, Ameerikada Dhexe, Koonfurta Ameerika iyo aagagga Waqooyiga Ameerika. Tani waxay u dhigi doontaa Jamaica inay udub dhexaad u tahay isku xirka hawada ee u dhexeeya Bari iyo Galbeed.
Waxaan aad ugu kalsoonahay inaan si kooban u arki doono natiijada tan maadaama labada diyaaradood ee aan la hadalnay ay muujiyeen rabitaan xoog leh oo ku wajahan Kariibiyaanka iyo, si ka sii badan, Latin America.
Wareegii hawlaha suuqgeyneed ee ay wehelinayeen wada-hawlgalayaasha dalxiiska iyo saadka ee Bariga Dhexe ayaa ahaa kuwo miro dhal ah, waxaana shaki la'aan ay keeni doonaan in la xaqiijiyo maalgashi iyo suuqyo cusub iyo furitaanka albaabada waaweyn.
UK Suuq Blitz
Isku soo wada duuboo u galitaanka suuqayada isha saddexaad ee ugu weyn, Boqortooyada Midowday (UK), si loo xoojiyo imaatinka waxay caddeeyeen inay si isku mid ah wax u soo saarteen waxayna soo gabagabeeyeen suuqyadeena caalamiga ah.
Waxaan hogaaminayay koox heer sare ah oo ka socotay Wasaaradda Dalxiiska iyo Hay’adda Dalxiiska Jamaica (JTB) ilaa Suuqa Safarka Adduunka, oo ka mid ah bandhigyada dalxiiska caalamiga ah ee ugu weyn, kaasoo lagu qabtay London intii u dhaxaysay 1 ilaa 3 November.
Waxa aanu wada-shaqeyn aad u wanaagsan la yeelanay la-hawlgalayaashayada muhiimka ah ee UK, waxaanan u xaqiijinnay u diyaargarowga Jamaica iyaga iyo badbaadadayada meel aan u soconno, iyada oo in ka yar boqolkiiba hal heerka caabuqa COVID-19 uu marayo Wadooyinka Resilient.
Intii aanu joognay Suuqa Socdaalka Adduunka, waxaanu la kulanay madaxda sare ee Amadeus, oo ah shirkad tignoolajiyada socdaalka caalamiga ah ee fadhigeedu yahay Yurub, kaasoo nagu wargeliyay in 30-kii Sebtembar la sii daayay filimkii ugu dambeeyay ee James Bond, No Time to Die, kaas oo leh muuqaallo badan oo la toogtay. Jamaica, waxay gacan ka geysaneysaa sidii loo wadi lahaa xiisaha Jamaica, gaar ahaan Boqortooyada Ingiriiska.
Jamaica waa hoyga ruuxiga ah ee Bond, iyadoo Ian Fleming uu ku qorayo buugaagta Bond ee gurigiisa, "Goldeye." Filimada Bond Dr. No iyo Live iyo Let Die ayaa sidoo kale lagu duubay halkan. Waqti la'aan in la dhinto, filim sameeyayaashu waxay dhiseen guriga Bond ee hawlgabka xeebta ee San San Beach ee Port Antonio.
Muuqaallada kale ee laga duubay Jamaica waxaa ka mid ah la kulanka saaxiibkiis Felix iyo la kulanka cusub 007, Nomi. Jamaica waxay sidoo kale labanlaabanaysaa muuqaalada Cuba ee dibadda.
Intaa waxaa dheer, maamulayaasha Amadeus waxay xuseen inay arkayaan raadin aad u sareysa iyo boos celin xiiso leh iyo baahida loo qabo Jamaica ee Boqortooyada Ingiriiska waxayna u sababeeyeen shaqada Wasaaradda Dalxiiska iyo hay'addeeda guud ee Guddiga Dalxiiska Jamaica (JTB) oo fure u ah. la-hawlgalayaasha suuqa.
Dabayaaqada bishan waxaan bilaabi doonaa inaan ka helno ugu yaraan 17 duulimaad todobaadkiiba Boqortooyada Midowday, taasoo ku soo celinaysa jasiiradda ku dhawaad ​​100 boqolkiiba awooda kursiga diyaarada iyadoo nambaradayada dalxiiska ay dib u soo laabanayaan.
TUI, British Airways iyo Virgin Atlantic waa saddexda diyaaradood ee rakaabka qaada ee isaga kala goosha UK iyo Jamaica iyadoo TUI ay samayso lix duulimaad todobaadkii, Virgin Atlantic oo kordhisa ilaa shan duulimaad todobaadkii iyo British Airways oo shan duulimaad todobaadkii ku dhaqaaqdo. Duulimaadyadu waxay ka dhammaadeen London Heathrow, London Gatwick, Manchester iyo Birmingham. Wixii intaas ka baxsan, waxay u badan tahay inaan aragno isbeddello jadwal oo dheeri ah iyadoo kooxaheennu ay sii wadaan wadahadallada ay la leeyihiin daneeyayaashayada.
Wararka ka imanaya suuqyadeena Yurub, markabka saddexaad ee ugu weyn Yurub, Eurowings, ayaa duullimaadkiisii ​​ugu horreeyay ka sameeyay Frankfurt, Jarmalka, kuna socday Montego Bay Noofambar 4, iyada oo ay la socdaan 211 rakaab ah iyo shaqaale.
Jarmalku waxa uu noo ahaa suuq aad u xoog badan, iyadoo 23,000 oo booqasho ah oo dalkan ka yimi ay yimaaddeen xeebaheenna 2019 ka hor masiibada. Duulimaadkan ka imanaya Jarmalka waxa uu gacan ka gaysan doonaa hadafkayaga aanu ku kordhinayno soo-booqdayaasha ka imanaya Yurub, taas oo kooxdaydu ay si firfircoon ula falgashay.
Adeegga cusub waxa uu u duuli doonaa laba jeer todobaadkiiba Montego Bay, isaga oo bixi doona Arbacada iyo Sabtida, waxana uu kor u qaadi doonaa gelitaanka jasiiradda ee Yurub. Intaa waxaa dheer, shirkadda safarka madadaalada ee Swiss, Edelweiss, ayaa bilowday duulimaadyo cusub todobaadkiiba hal mar gudaha Jamaica halka Condor Airlines ay dib u bilowday qiyaastii laba jeer duulimaadyo todobaadkiiba inta u dhaxaysa Frankfurt, Germany, iyo Montego Bay bishii Luulyo.
Shaki kuma jiro in dalxiisku yahay garaaca wadnaha ee dhaqaalaha Jamaica iyo kicinta noo suurtagelinaysa inaan si degdeg ah uga soo kabsano. Guulahan la taaban karo ee aanu ka samaynayno dalxiiska waxa hubaal ah inay dib u soo noqon doonaan faa'iidada dhammaan dadka ay khusayso - dadka Jamaican, la-hawlgalayaasha dalxiiska iyo booqdayaashayada.